नारी शक्ति - कभर गर्ल - नारी
फाल्गुन ३, २०७७ ‘मलाई देखेर वा हेरेर मजस्तो होइन, आफूभित्रको क्षमता पहिचान गरी तपाईं आफूजस्तै बन्ने प्रयास गर्नुस्’ कुराकानीको सुरुवातमै युवाका लागि सुझाव दिँदै २४ वर्षीया ‘मिस युनिभर्स नेपाल’ अंशिका शर्माले भनिन्, ‘तपाईं आफू बन्नुहोस् अरु होइन, यसले तपाईंको अलग पहिचान र अस्तित्व स्थापित गर्नेछ ।’
झापाका बालकृष्ण शर्मा आफैले पनि महिला र बालबालिका क्षेत्रमा सक्रिय भएर छोरीलाई सानैदेखि हरेक कुरामा अब्बल बनाउन व्यावहारिक ज्ञान दिँदै आए । अंशिकाकी आमा मालाले तीन सन्तानलाई कुनै भेदभाव नगरी हुर्काइन् । काठमाडौंको भिएस निकेतनबाट ‘प्लस टु’ सिध्याएपछि उनी उच्चशिक्षाका लागि अस्टे«लिया हान्निइन् । सिड्नीस्थित ‘सेन्ट्रल क्विन्सल्यान्ड युनिभर्सिटी’ बाट आइटीमा स्नातक यिनीसँग बाल्यकालमा अन्तर्मुखी स्वभावकै कारण अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको र बिस्तारै समय र अनुभवले सिकाउँदै लैजाँदा बहिर्मुखी हुँदै गएपछि नेतृत्व लिन सफल भएको मिश्रित अनुभव छ । ‘मैले हरेक कुरा वा कामलाई प्यासनका रूपमा लिएँ । त्यसमा दृढ भएर लागें । म जे गर्छु अत्यन्तै केन्द्रित भएर गर्छु’ अंशिका भन्छिन्, ‘मिस युनिभर्स नेपालको जित पनि मेरो त्यही स्वभावको प्रतिफल हो ।’
अंशिकाको अर्थ के हो ?
भगवान्बाट प्राप्त सुन्दर उपहार ।
तपाईंमा भएको कुन कुराले ‘मिस युनिभर्स नेपाल’ को उपाधि जित्न सफल बनायो ?
म आफैंले सोच्दा मेरो मेहनत र लगनशीलता । अरुले भन्दा मेरो प्रस्तुतीकरण ।
के कुराले तपाईं अरुभन्दा फरक हुनुहुन्छ ? अर्थात् आफ्नो कुन कुरा युनिक लाग्छ ?
म त्यस्तो युनिक छु जस्तो त लाग्दैन र पनि टिमवर्कमा विश्वास गर्ने र मिलेर अगाडि बढौं भन्ने मेरो सोच नै अलिकति फरक छ जस्तो लाग्छ ।
‘मिस युनिभर्स’ को तयारी कस्तो र कसरी हु“दैछ ?
‘मिस युनिभर्स नेपाल’ को ताज पहिरिएको केही दिनपछि नै बलियो तवरले ‘मिस युनिभर्स’ को तयारी भइरहेको छ । सकिल कु“वरले हेयर एण्ड मेकअप तथा कम्युनिकेसन स्किलमा प्रशिक्षण दिइरहनुभएको छ । म छिट्टै तीन साताको प्रशिक्षणका लागि फिलिपिन्सको एम्पायर स्टुडियो जा“दैछु । ‘मिस युनिभर्स’ अप्रिल–मेमा अमेरिकामा हु“दैछ ।
‘मिस युनिभर्स’ मा तपाईं कुन विषयमा केन्द्रित हुनुहुन्छ ?
मैले दुई वर्षयता नेपालका ग्रामीण बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षामा काम गरिरहेकी छु । विद्यार्थीहरूको समूहमार्फत पैसा उठाएर हामीले सिड्नीबाटै यो काम गरिरहेका थियौं । शिक्षा नै सबै कुराको मूलद्वार भएकाले म ‘मिस युनिभर्स’ मा नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नेछु ।
‘मिस युनिभर्स’ को ताज जित्नुभयो भने राष्ट्रका लागि तपाईंको पहिलो काम के हुनेछ ?
अहिले पनि नेपालका गाउँ–गाउँमा किशोरी महिनावारी हुँदा चार दिन स्कुल जाँदैनन् । किनभने छुट्टै शौचालयको अभाव छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर किशोरीको शिक्षामा परिरहेको छ । यसको समाधानको प्रयास गर्नेछु । यी र यस्तै मुद्दाहरूमा काम गर्नेछु । ‘मिस युनिभर्स’ को उपाधि जितें भने नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई नै मैले प्राथमिकतामा राख्नेछु ।
इतिहासमा नाम लेखिनलायक कुनै व्यक्तिसँग लन्च–डेटिङ जाने अवसर मिल्यो भने कसलाई रोज्नुहुन्छ र के विषयमा कुराकानी गर्नुहुन्छ ?
न्युजिल्यान्डका प्रधानमन्त्री जाकिन्डा आर्रडनसँग । यति ठूलो महामारीको विपद् र आतंकवादका बीचमा पनि एउटी महिलाले कसरी सहजै आफ्ना जनतालाई शान्तिपूर्वक बाँच्ने मात्र होइन सहज जीवनयापनको व्यवस्था मिलाउन सफल हुनुभयो म त्यो आँट, साहस र शक्तिबारे जान्न चाहन्छु ।
कुनै यस्तो एउटा चुनौती जसलाई तपाईं मुश्किलले पार गर्नुभएको छ ?
आफूमा विश्वास नहुँदा केही गर्न सकिँदो रहेनछ भन्ने अवस्थालाई पार गरी आज म यहाँसम्म आइपुगेकी छु ।
युवाहरूले वर्तमान अवस्थामा भोगिरहेको मुख्य चुनौती के हो र समाधान के देख्नुहुन्छ ?
मौसम तथा जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले अहिले विश्वभरका युवामा गहिरो असर पारिरहेको छ । युवाले बाँच्ने समय लामो छ तसर्थ पानी, बिजुली, वनजंगल, वन्यजन्तु, पर्यावरण सुरक्षित राखी पृथ्वीलाई जोगाउनु जरुरी छ । यसमा सरकारको नीति पनि जिम्मेवार हुन्छ ।
नारीमा भएको बलियो शक्ति के हो र यसलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ ?
सहनशीलता । संसारका हरेक आमा यसका उदाहरण हुन् । नौ महिना गर्भमा राखेर सन्तानलाई जन्म दिनु नारीमा भएको शक्ति हो ।
केही सन्देश ?
आफ्नो यात्रा आफैंले तय गर्ने हो, अगाडि आउन नडराउनुहोस् । तपाईं आफू भएर बा“च्नुहोस् ।
लोकेसन : होटल याक एण्ड यति, दरबारमार्ग
पहिरन : काव्य बुटिक पाटन
हेयर तथा मेकअप : ब्लिस (सकिल कुँवर)
स्टाइलिस्ट : अविनाश श्रेष्ठ
ज्वेलरी : अपाला ज्वेल्स